‘केपी ओली इतिहासकै कमजोर प्रधानमन्त्री’
October 8, 2018 Spnews 0
प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीे ३ दशकभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेशामा आवद्ध रहे । २०५२ सालमा ‘नेपाली कम्युनिजम’ मा विद्यावारिधि परेका केसीले ५ दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखन तथा सम्पादन गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक […]
प्रचण्डले ओलीलाई २ सय करोड दिएर वाम गठबन्धन किनेका हुन्: अरुण सुबेदी
August 27, 2018 Spnews 2
जलसरोकारका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदी आन्तरिक राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कुटनीतिक सम्बन्धजस्ता विषयमा सटिक र चोटिलो टिप्पणी गर्नु हुन्छ । उहाँको विश्लेषणलाई समर्थन गर्नेहरु पनि उल्लेख्य छन् । यद्यपि उहाँका आलोचकहरु पनि नभएका होइनन् । प्रदेश र […]
July 29, 2018 Spnews 0
﻿ वाम गठबन्धनको रमिते उत्सवमा रमाई रहेको नेकपा एमाले अहिले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुने दिवास्वप्न देख्दै सत्ता रसास्वादनको बाक्लो र्‍याल काढेर बसेको छ । यो बामपन्थी गठबन्धनको नैतिक, व्यवहारिक र शैद्धान्तिक आधार के हो […]
July 20, 2018 Spnews 0
शीर्ष नेता को बनेन प्रधानमन्त्री ? सबैले सत्ता सञ्चालन गरे, देश सञ्चालन गर्न सके कि सकेनन् ? तीतो अनुभव छ आमनागरिकमा । प्राविधिकरूपमा सत्तामा पुग्न जति कठिन छ, सत्तामा पुग्नासाथ त्यो कठिन यात्रा भुलेर स्वार्थको […]
April 24, 2018 Spnews 0
अहिले हाम्रा भइरहेका सडकहरु नै खाल्डाखुल्डीले निकै नराम्रा बनेका छन् । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको सडक हो । भएकै सडकका खाल्डा पुर्न नसक्दासम्म रेलको सपना बाँड्नु न्यायोचिन होइन । अहिले रेल हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन । […]
केपी ओलीले मोहन राजवंशीलाई कुटेर नालामा फालेपछि…
April 4, 2018 Spnews 0
झापाली विद्रोहलाई नेपाली कम्युनिष्टहरु एउटा पाठ मान्छन् । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि झापा विद्रोहमा सहभागी थिए । तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती शासकहरुद्वारा सुखानीमा हत्या गरिएका रामनाथ दाहाल ओलीका राजनीतिक गुरु हुन् । ओली […]
March 31, 2018 Spnews 0
लेखिका : ज्वाला संग्रौला मलाई मनपर्ने थोरै नेतामध्येका एक हुन् लालबाबु पण्डित।नरम स्वभाव तर कडा प्रस्तुती यिनका बिशेषता हुन्।दुई बर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका यिनले धेरै उदाहरणीय काम गरेका छन्। पिआर पाएर पनि सरकारी पदमा […]
March 23, 2018 Spnews 0
काठमाडौँ । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उखान यत्तिकै चलेको होइन। मान्छे स्वस्थ हुनका लागि उसको तन र मन दुवै स्वस्थ हुनुपर्छ। स्वस्थ मान्छेको व्यवहार र क्रियाकलाप सहज र सामान्य हुन्छन्। स्वस्थ मान्छेको निर्णय क्षमता […]
संघियताले नेताहरू करोडपतिबाट अर्बपति: मुलुक हरिकंगाल त हुँदैन ?
March 22, 2018 Spnews 0
-कमलप्रसाद कोइराला मुहमद विन तुगलक दिल्लीको गद्दीमा बसे। उनलाई के लाग्यो भने हजारौं वर्षदेखि भारतको राजधानी रहेको दिल्लीभन्दा दौलतावाद राज्यको केन्द्रमा पर्छ। उनले राजधानी दौलतावाद सार्ने शाही हुकुम जारी गरे। मन्त्रीहरू, जागिरदारहरू सेनापति, सेना, व्यापारी […]
माओवादीको कमाण्डदेखि प्रहरीको कमाण्डसम्म पुग्ने को हुन ‘बादल’ ?
February 26, 2018 Spnews 0
काठमाडौं : नवनियुक्त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यसअघि २०६५ सालमा रक्षामन्त्री भएको थियो । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा बादल चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका बादल अहिले भने राष्ट्रियसभा सदस्य हुन । दोस्रो संविधानसभाको […]